ငယ်ငယ်ကတည်းက မိသားစုအပေါ် တာဝန်မကျေပဲ အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်တဲ့ ဖခင်ကြောင့် အဖေဘက်ကအဘွားကို သံယောဇဉ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ ဇေရဲထက် – celepublic
မင်းသားချော ဇေရဲထက်ကတော့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်လာတာနဲ့အမျှ သူ့ရဲ့ မိသားစုတွေ အပေါ် တော်တော်လေး ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က ဇူလိုင် လ (၁၁) ရက်နေ့မှာတော့ ဟန်ငြိမ်းဦးအကောင့်ပိုင်ရှင်တင်ခဲ့တဲ့ ဇေရဲထက်ရဲ့ အဖေဘက်က အဖွားက တော်တော်လေး ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဇေရဲထက်က ပရိသတ်တွေရဲ့ အထင်အမြင်လွဲခြင်းကို ခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဇေရဲ ထက်က အခုလိုပဲပြောထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
“ကျွန်တော်ကို မူကြိုကအစ (၁၀)တန်းထိအဘွား အမေ့ဘက်ကအဘွားလက်ပေါမှာြ ကီးပြင်းခဲ့ သလို အမှတ်(၅)ကျောင်းမှာပဲနေခဲ့တာ။ ကျွန်တော့်ကို အဖေ့ဘက်ကအဘွားသာ တာဝန်ယူ တဲ့စိတ်ရှိခဲ့ရင် အဖေ့ဘက်ကအဘွားဆီပဲ ကျောင်းတတ်မှာပေါ့ ကျောင်းတောင်မသိဘူး။ သိတတ်ခါစကတည်း အဖေ့ကိုလည်းချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မုန်းလည်းမုန်းတယ်။ အဖေကို အဖေလို့တောင်မခေါတတ်ဘူး။ ဝင်းမြင့်လို့ပဲခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုကတည်စဉ်းစားပါ။
ရိုင်းစိုင်းတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အတူမနေခဲ့တော့ အဖေဆိုတာမခေါ်တတ်ဘူး အဖေဆိုတဲ့လူနဲ့ တစ်ရက်တော င်အတူမနေခဲ့ရတော့ အဖေ့ဘက်ကအဘွားနဲ့ နေခဲ့ရလားဆိုတာစဉ်းစားပေါ့။ အမေ့ကို မလုပ်ကျွေး အရက်သောက်ပြီးနှိပ်စက်။ အမေ့ဘက်ကအဘွားဆီအမေကပြန်လာ ရွှေတွေငွေတွေစုမိတော့ ပြန်ပေါင်း၊ ကုန်ရင် အမေ့ကိုထိုးကြိတ် နှာခေါင်းကိုအုတ်နီခဲနဲ့ထုတာမြ င်ခဲ့ တဲ့ သားတစ်ယောက် ဘာမှမလုပ်ကျွေးပဲ နှိပ်စက်တဲ့အဖေကို သားဖြစ်သူက အခုထိအဖေ ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ သည်းခံခဲ့တယ်။
“အမေ့ဘက်ကအဘွားက ဆန်စက်ထောင်ပေးတော့လည်း ဆန်ခိုးရောင်း အလုပ်ကိုလ က်ေြ ကာ တင်းအောင်မလုပ်တော့ ဆန်စက်တောင်ရောင်းခဲ့ရတယ်။ အခုသတိရတယ်ကျေးဇူး ပါအ ဘွား ကျွန်တော်လမ်းဘေးရောက်တုန်းက သတိရဘူးလား အိမ်ပေါကဆင်းတုန်းကထ မင်းတ လုတ်ေ ခါ်ကျွေးဖူးလား။ အမွေဆိုင်အိမ်တွေ လယ်တွေရောင်းတုန်းကကော သတိတချက်ရဘူး လား။ မမက်ပါဘူး အခုက အဘွားတော့ ကန်တော့ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေက ဘယ်သားသမီးက အကုန်သမသွားတာလည်းဘယ်သားသမီးမြေးကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ပြီးကျွေးတာလဲ? အရမ်း ဝမ်းနည်းပါတယ်။ အဘွားကိုသနားပါတယ်။”
“အမေဘက်ကအဘွား အရင်းပြုတ်တဲ့အထိ ကျွန်တော်ကို(၁၀)တန်းအောင်တဲ့ အထိထားပေး ခဲ့တာရယ် ကျနော့်ကိုဂရုစိုက်ပေးခဲ့တာရယ်ဒါတွေက ကျွန်တော့ကိုသံယောဇဉ်ကော ပိုစေသလို အရမ်းချစ်တယ်။ ဆံပင်ညပ်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ အိတ်ဆွဲတောက်တိုမယ်ရ ဦးလေးဆို င်မှာ စားပွဲထိုးလုပ်ရတယ်။ နှစ်လုံးရောင်းဖူးတယ်။ သက်ကယ်ရောင်းတယ်။ မီးသွေးရောင်း တယ်။ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီမောင်းတယ်။ စပယ်ရာလုပ်ဖူးတယ်။ ကျောက်ဆည်မှာထမင်းဆိုင် ဖွင့်ဘူးတယ်။ ဘဝစုံပေမယ့် အခုထိ မလိမ်စားဘူး ခိုးမစားဘူး သူများမျက်ရည်ပေါက်ကြီးင ယ် ကျအောင်မလုပ်ဖူးဘူး အဲ့အတွက် ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံတယ်”
“ရန်ကုန်သွားတုန်းက ဘယ်အဘွားက မျက်ရည်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ကားဂိတ်လိုက်ပို့ပေးခဲ့တာလဲ? ထမင်းဆိုင်ဖွင့်တုန်းက ဘယ်အဘွားက သွေးစုနာတွေပေါက်နေတာတောင်ကြက်ဥေ တွထို င်ကြော်ပေးခဲ့တာဘယ်အဘွားလဲ? မစော်ကားပါဘူး ကျွန်တော်အမေ့ဘက်ကအဘွားနဲ့ငယ် ငယ်ကတည်းကနေခဲ့တဲ့အတွက်အမေအရင်းထက်ပိုချစ်တယ်။ အခုချိန်ထိ ကျွန်တော်နေ မကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ တန်းရောက်လာတတ်တာ ကျွန်တော်အမေဘက်ကအဘွား ဒေါ်ခင်ေ ဌးမြင့် ကျနော့်အမေပါ။ အဖေဘက်ကအဘွားကိုမချစ်တတ် သံယောဇဉ်မရှိပေမယ့် မရိုင်းစိုင်း တတ်ဘူး ” ဆိုပြီး ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇေရဲထက်ကတော့ ပရိသတ်တွေ အထင်အမြင်လွဲမှားမှာစိုးတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ ငယ်ဘဝအြေ ကာင်းတွေကို တစ်ခုမကျန် ဖွင့်ဟပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဇေရဲထ က်တို့ မိသားစုပြဿနာကိုသိရပြီမို့ ဇေရဲထက်အပေါ် စိတ်ရှင်းလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
← ဘုရားသွားဖူးမဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ တစ်ရွာလုံး အံ့အားသင့်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ လင်မယား
၁၁၅ မိုင် ပိုင်အိုးနီးယား သူဌေးလင်မလား ရာသက်ပန် နေ့ဆွမ်းလှူဒါန်းမှုကြီးပြုလုပ် →
ကလေးဆန်ဆန် အမူအယာလေးတွေနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ခြူးလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေ
ပွင့် ကို သူရဲ့ ငယ်ရည်းစားဟောင်းပါလို့ ထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ ဟဲလေး
ကိုယ့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ မပြေလည်တဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် မဝေဝေလင်း